UMsunduzi nethuba lesiqalo esisha sezakhamuzi – Msunduzi News
NGALESI sikhathi abantu baseNingizimu Afrika bebhekene nengcindezi kwezomnotho, uMasipala uMsunduzi usuqhamuke neqhingasu elingahle lehlise umthwalo kwabakweleta lo Masipala. Lokhu kuvele emcimbini obungoLwesibili lapho iMeya uThemba Njilo yethule uhlelo lukashwele oluzoqala mhla zili-15 kuMfumfu ngowezi-2018 uphele mhla zili- 15 kuMasingana ngowezi-2019.
Ethula inkulumo yakhe uNjilo akakufihlanga ukuthi enye inhlosongqangi yalo shwele ngukwehlisa isikweletu esingaphezulu kwezigidigidi ezi-2 uMasipala asikweletwa yizakhamuzi, yiMinyango kaHulumeni kanye namabhizinisi ehlukene. Khona lapho uNjilo ukwamukele ukuthi esikhathini esedlule kuke kwaba nezingqinamba ekuqoqeni izikweletu ngenxa yezixakaxaka nathe lokho sekuyinto yayizolo.
Abanye okubhekwe ukuthi bahlomule kulolu hlelo ngabasebenzi bakhe uMasipala kanye namakhansela nathe njengezakhamuzi banelungelo lokuza bazothola usizo noshwele. Nalabo abasebenzisa ugesi wekhadi nabazidonsela ugesi ngokungemthetho bazowuthola ushwele uma besondela. Uma lo mkhankaso ube yimpumelelo uMkhandlu ungabuyelwa okungenani yizigidi ezingama-R250.
UNjilo ube esenxusa izakhamuzi ukuthi zilithathele phezulu leli thuba ezilivulelwe wumkhandlu ngoba laphela kuzobe sekuqina umthetho sezikhokha kakhulu.
Kuwo lo mcimbi kube sekuvela izinkinga uMasipala obenazo eMnyangweni Wezamanzi Nendle. Ilapho umuzi unamanzi kodwa ungenalo imitha. Kuphinde kube khona izindawo ezinawo amamitha kodwa zingekho emabhukwini kaMasipala okukhokha. Izakhamuzi zibe nomkhuba wokuzidonsela amanzi ngokungemthetho.
Umnyango obhekelele ukukhokhiswa kwabantu unezingqinamba obhekene nazo nawo. UMasipala uvumile ukuthi bayazi kunabantu asebeke bafaka izikhalo zabo zokuthi abazitholi izitatimende zobungako bezikweletu, ngalo mkhankaso bathi bazoqinisekisa ukuthi abantu uma sebefika udaba lwabo lusetshenzwe ngokushesha bavumelane nanokuthi bazokhokhiswa kanjani.
IBambameneja ledolobha uNkk uNelisiwe Ngcobo enkulumweni yakhe ukuvezile ukuthi benguMasipala babone kubalulekile ukuthi babhekane mahlanze nezinkinga. Unxuse izakhamuzi ukuthi ziphumele obala ngezikweletu zazo. Ube esesho ukuthi ukunqanyulwa kukagesi namanzi kulabo abakweletayo akuzukuma ngenxa yokuthi kuvulwe leli thuba likashwele.
UMnu uSimphiwe Mchunu uveze ukuthi ushwele unezigaba ezimbili. Esokuqala yilesi esivuliwe sokuthi abantu baye emaHhovisi oMkhandlu bathole amaphepha esicelo bagcwalise iminingwane yabo. Lokho kuyobe sekuphothula isigaba sokuqala. Kuleli phepha lesicelo kufakwa imininingwane yesakhamuzi, nokuthi ushwele lo ofunekayo woqondene nani. Bona bewuMasipala bazothumela umqhafazo wokuthi bayitholile incwadi yesicelo. Ube esenxusa ukuthi izakhamuzi zifake izinombolo zomakhalekhukhwini khona zizokwazi ukwenza lokhu ngokwesimanjemanje nokuyindlela esheshayo.
Isigaba sesibili ilapho isakhamuzi kuzomele sigcwalise incwadi yesicelo engafani neyasekuqaleni. Okubalulekile wukuthi kufakwe inombolo etholakale emqhafazweni eyehlukile kulena etholakale kugcwaliswa isicelo sokuqala. Uma sesidlulisiwe isicelo uMkhandlu uzocubungula ukuthi lo muntu kumele yini ngempela athole ushwele.
Ekugcineni ozobe ekulungele ukuthi athole ushwele uzothola incwadi ezosho ukuthi isicelo sakhe sibe yimpumelelo. Kube sekunxuswa umuntu onezikhalo afike ngaphambi kukaMasingana zili-15 onyakeni ozosombuluka.
Previous post: Ukunikezela ngezindlu kuMasipala kusenguginqigonqo
Next post: Eyokuba uSomlomo isho ukuncelisa amawele